U11 ကို $100 USD တိတိလျော့ရောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ HTC! – AsiaApps
HTC ရဲ့ အထူးပရိုမိုရှင်းဖြစ်တဲ့ U11 ကို $100 တိတိစျေးလျော့ရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ (ဒီနေ့) မှာစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ HTC ဟာသူ့တို့ရဲ့ Official Website မှာတရားဝင်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြထားတဲ့ပုံအရဆိုရင်တော့ HTC ဟာ U11 (64 GB) အတွက်ပဲ $100 လျော့ပေးထားတာဖြစ်ပြီး U11 (128 GB) ကိုတော့ စျေးမလျော့ပေးထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 64 GB ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ 128 GB ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် အခွန်ဆောင်စရာမလိုဘူးဗျ။ စျေးနှုန်းကိုတစ်ခါတည်းအပြီးမပေးနိုင်ရင်တောင် ၂၄ လ အပြတ်စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး တစ်လကို U 11 (64 GB) အတွက် $23, U 11 (128GB) အတွက် $31 ငွေချေပြီးဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ U11 ကိုဝယ်ယူလိုက်ရင် နောက်ထပ် ပရိုမိုးရှင်းကအစီအစဉ် တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ $400 ရှိတဲ့ UA (Under Armour) Healthbox ကို $99 နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ UA Healthbox ကတော့ Fitness tracker device တစ်မျိုးပါ။ UA Healthbox အတွက်ကတော့ ?
အခုလို အလန်းစားပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကတော့ ဒီနေ့ကစပြီး ချစ်သူများနေ့အပြီး (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅) အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ USD 100 မြန်မာငွေနဲ့ဆို တစ်သိန်းကျော်လောက် သက်သက်သာသာဝယ်ယူနိုင်တာကြောင့် လက်မနှေးကြဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Source (HTC), Via
Android, Deals, HTC